qoraalladii Dibadda - credits kala iibsiga ka dal kale | USAHello
Waddan kasta wuxuu leeyahay nidaamyada dugsiyada kala duwan. waxaa laga yaabaa in aadan awoodin in ay guriga ka isticmaasho degree marka aad guurto. Baro sida aad ka heli karto qoraalladii aad shisheeye qiimeeyo si aad u codsato waxbarashada aad waddan kale, marka aad timaaddo Maraykanka.
Haddii aad rabto in aad dugsiga bilowdo ee USA, waxaad u baahan doontaa si ay u muujiyaan waxa ay waxbarashada aad heshay wadankaada hooyo. Waxaad u baahan doontaa in qoraalladii aad shisheeye qiimeeyo. Loo-shaqeeyayaasha weydiin kartaa oo ku saabsan shahaadada aad. Laakiin xataa haddii aad leedahay degree ama shahaado wadankaada hooyo, laga yaabaa in aad u baahan tahay in ay qaataan fasallo dheeraad ah ama baadhitaano si uu shuqulka aad shaqadaadii hore.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah erayada waxtar leh si ay u fahmaan marka aad ka hadleynaa qoraalladii shisheeye:
transcript - warqad ay ku qorantahay waxa fasallada aad ka qaadatay dugsiga sare ama jaamacadda. Dadka intooda badan ka heli iyaga ka dib markii ay qalin jabiyaan. sida caadiga ah waxaad ka dalban kartaa qoraalladii dheeraad ah shisheeye ka dugsiga.
qiimaynta Waxbarashada - qiimayn ku sameeyey by shirkad taasoo micnaheedu iyo cilmibaarisyadii aad qoraalka. Waxay go'aansadaan haddii waxbarashada aad heshay ee dalka waa isku mid ama la mid ah sida in Maraykanka.
credits School - dugsiyada iyo jaamacadaha Maraykanka isticmaalaan nidaamka credit a. Credits yihiin tirada loo qoondeeyey fasal kasta ama koorso. Fasallada waxaa laga yaabaa in la helay 1, 2, 3 ama xataa 4 credits. Ka hor inta aadan u qalin jebiyaan, aad u baahan tahay si ay u helaan xaddi gaar ah oo dhibcood.
degree - shahaadada jaamacadda ama kulliyadda.
Haddii aad codsato shaqo aan xirfad lahayn, waxaa laga yaabaa in aadan u baahan in la caddeeyo waxbarashada. Haddii aadan u baahan tahay qoraalladii aad shisheeye qiimeeyo, waxaad badbaadin kartaa lacag on ujrada qiimaynta. Laakiin shaqooyinka qaar ka mid ah lacag dheeraad ah haddii aad haysato shahaadada dugsiga sare ama shahaado jaamacadeed.
Haddii aad codsanayso meel xirfadeed, hubaal waa in aad is aad degree qiimeeyo. Iska bilaabay sida ugu dhakhsaha badan ee aad awoodid, maxaa yeelay, qiimaynta qaadan kartaa waqti dheer.
First, qoraalka ka heli dugsiga. Ka dibna u gudbiyo shirkadda qiimaynta qoraalka ah. Waxaad ka heli kartaa qiimayn ah qiimaynta guud koorso-by-Dabcan.
Course by qiimaynta Dabcan
qiimeeyaha qoraalka waxaa uu eegayaa qoraalladii shisheeye si ay u arkaan dhammaan fasallada aad ka qaadatay mid ka mid ah. Waxay raadinayso si ay u arkaan haddii fasallada aad ka qaadatay oo la mid ah kuwa aad u baahan tahay in USA ay yihiin. Waxaa loo sameeyaa marka aad rabto in aad dalbato in college. Waxaa sida caadiga ah waa $ 150- $ 200.
qiimeeyaha qoraalka waxaa uu eegayaa qoraalladii shisheeye si ay u arkaan haddii heerka aad ka gobolka gurigaaga leeyihiin waa isku mid sida degree ah ee USA. Tan waxaa badanaa la sameeyaa marka aad u codsaneysid uu shaqo. Waxaa kaaga agagaarka $400.
Dhibaatooyinka la xiriira qiimeynta dhibcaha shisheeye
Dugsiga ayaa ku soo qeyb galay ayaa laga yaabaa in la xiray, ama waxay noqon kartaa meel aan badbaado lahayn. Si kastaba ha ahaatee, Ma laga yaabaa in aad awoodid in aad hesho qoraalka dugsiga. Haddii aad isku dayayaan in ay helaan qoraalka ah ee shaqada, sharax xaalada waaxda shaqaalaha shirkadda ee. Haddii ay tahay dugsiga, wac waaxda ogolaanshaha dugsiga ku saabsan dhibaatadaada.
Waxaad baran kartaa in aad u baahan tahay in ay qaataan fasallo dheeraad ah si aad u buuxiso shahaado ee USA. Tani waxay noqon kartaa mid niyad jab. Xusuusnow in ay jirto sabab for this. Tusaale ahaan, muhandas ee Ciraaq iyo muhandas ee dalka Mareykanka ku samayn lahaayeen shaqo isku mid ah. Laakiin waxaa jira xeerar kala duwan si ay u bartaan.
Waxaa jira shirkado badan oo online in ay sheegayaan in ay qiimeeyaan qoraalladii. Taxaddar! Qaar ka mid ah iyaga ka mid yihiin fiisa. Waxaad laga yaabaa in aad macluumaadkaaga shakhsiyeed ama lacag kaa qaadin ka hor. Laakiin waxaa jira shirkado daacad waxaad isticmaali kartaa, sida Adeegyada Waxbarashada Adduunka, Adeegyada Qiimaynta Waxbarashada, iyo Global Aqoonsiga qiimeeyeyaasha Inc.